Ụlọ nyocha Binance na-eme atụmatụ itinye ego na netwọk Manta maka nzuzo Web3 | by Adaora Anders | Medium
Ụlọ nyocha Binance na-eme atụmatụ itinye ego na netwọk Manta maka nzuzo Web3
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na Binance Labs, isi ụlọ ọrụ na ihe ọhụrụ incubator nke Binance, mere ntinye ego na Manta Netwọk, ụkpụrụ nzuzo Web3 nke e mere iji kewapụ akụ crypto.
Manta Network’s Layer-otu imewe netwọk na-eme ka ihe akaebe efu na-eme ka akụ crypto bụrụ nkeonwe. Ejiri usoro ihe eji arụ ọrụ, teknụzụ nzuzo nke Manta na-arụkọ ọrụ na akụrụngwa parachain ndị ọzọ n’ime Polkadot na Kusama gburugburu. O nwetaburu otu n’ime parachain iri mbụ na Kusama maka netwọkụ canary ya, Calamari netwọk, mgbe ọ gbasachara 218,000 KSM sitere na obodo. Manta wepụtara Dolphin Testnet ya n’oge na-adịbeghị anya, nke megoro ihe karịrị azụmahịa nzuzo 10,000 pụrụ iche.
N’akụkụ usoro ntinye ego, Binance Labs ga-akwado mbọ Manta Network ka ọ na-aga n’ihu na-ewupụta ngwaahịa, ọrụ, na teknụzụ ndị na-eme ka nzuzo na-enweghị isi. A ga-ebu ụzọ tinye atụmatụ Manta Network’s Dolphin testnet na netwọkụ Calamari ya, na ọrụ akpọrọ MariPay. Na mwepụta, MariPay ga-enwe ike ịwepụ akụ parachain dị iche iche na Kusama gụnyere KSM na akụ obodo Calamari, KMA. Manta Netwọk na-arụ ọrụ ugbu a na parachains dị iche iche iji nweta interoperability maka privatization nke akụ ọrụ ha.
Nicole Zhang, onye ntụzi itinye ego na Binance Labs, kwuru na “Nzuzo bụ ihe dị mkpa iji hụ na scalability na-eto eto ojiji nke Web3. Anyị na-ahụ Manta na-eweta ụzọ pụrụ iche na nke bara uru iji gboo nsogbu a. Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ na ọrụ ahụ iji weta nzuzo dị egwu na oghere blockchain. “
Kenny Li, onye nchoputa nke Manta Netwọk, na-ekwu, “Ọrụ Manta Netwọk na oghere nzuzo Web3 bụ iweta nzuzo dị ka ihe bara uru na akụ crypto niile. Obi dị anyị ụtọ iweta Binance Labs dị ka onye na-etinye ego na atụmatụ, ma na-atụ anya ka anyị na ha na-arụkọ ọrụ n’ịgbasa uru nzuzo nke Manta Netwọk na netwọk ndị ọzọ na ngwa ndị agbasaghị.
Article has been translated to Igbo language from here
Visit the medium article to read more.